ABOn kaayyoo dha!ABO fi ODPn Kaayyoo iratti wal dhaban!Kaayyoon ODP-Oromo fi Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABOn kaayyoo dha!ABO fi ODPn Kaayyoo iratti wal dhaban!Kaayyoon ODP-Oromo fi Oromiyaa diigee Ethiopia ijaaruu dha!
Kaayyoon ABO~sirna Habashaa diigee, Oromoo fi Oromiyaa ijaaruu dha.
Namoonni hedduun yeroo ABO 1991 faarsan ni argina. ABO 1991kana faarsuun hin badu. Garuu, ABO bara 1991 faarsanii, ABO bara ammaa cabsuun hin ta’u. ABOn kaayyoo dha.
Gama biraan, ABOn bara 1991 sun dhugumatti ABO ammaa waliin waan ittiin wal hin fakkaanne ni qabaata. ABOn 1991 fi ABOn 2018 yeroo fi yoomesa addaa keessa jiru. Dhalootii fibarri illee addaddummaa ni qaba. Diinni waiin lolaa jirrus addaddummaa akak qabu kan huabtamuu dha. Addunyaan bara sanaa fi bara ammaas waan ittiin addadda bahan ni qabu. Hubannaan Oromummaa bara sanaa fi bara kanaas waan ittiin wal caalu qaba. Dammaqiinsi yeroo sanaa fi ammaas waan ittiin walhinfakkaanne ni qaba. Kanaaf, ABOn bara 1991 sun fi ABOn bara ammaa yeroo walbira qabnu waa hedduu xiinxaluu gaafata.
ABOn bara 1991s, ABOn bara ammaas karaa hedduun jabina walfakkaatan ni qabu. Oromoo fi Oromiyaaf itti fufiinsaan qabsaa’uun jabina jalqabaati. Mul’ataa fi ergama kaayyoo ummata Oromoo irratti hundaa’een masakamuunis jabina hundee qabsichaa ti. Otuu ABOn bara 1973 hin jiraanne, ABOn bara 1991 hin jiraatu; otuu ABOn bara 1991 hin jiraanne, ABOn 2018 hin jiraatu. Tokko, tokoof hirkuu fi dagalee taéetu, kaayyoo san as fullaase.
Dhugaadha, hogganootaa fi miseensota ABO1973/1991 keessaa turan gariin wareegamaniiru; gariin dhaabicha keessaa bahaniiru; gariin immoo kaayyichatti cichanii amma illee amnatti jiru; deeggarttota ABO 1991 keessaa gariin wareegamaniiru; gariin bakka biraatti galaniiru; gariin immoo amma illee dhaabicha utubanii qabsicha adeemsisaa jiran.
Hunda caalaa, hoggantoti fi miseensoti ABO 1991 turan, ammas dhaabicha waliin jiran immoo addatti galata guddaa qabu; isaan daandii haqaa san qabatanii, duulaa fi badiinsa yeroo hedduu qabsicha irratti banaman qolatanii, irraas dandamatanii dhaaba keenya jaalatamaa kana, kaayyoo isaa waliin tiksanii yoonaan nuu gahaniiru; miseensotaa fi deegagrtoota haaraas horachaa dhaabicha baranaan gahaniiru; ABO bara ammaa! ABOn kun dhaloota guddifatee, Qeerroo Bilisummaa Oromootti faajjii qabsoo kennatee jira; ummata Oromoos daran dammaqsee mormii fi diddaa keessatti tokkummaan hiriirsee jira; lammiilee Oromoo diinaaf ulee turanis damamqsee akka isaan eenyummaa fi dantaa saba Oromoof falmatan taasisera; gucha qabsoo dhaloota maratti agarsiisee hundee jijjirama har’a ta’eera; jijjiirama haráan tana hunduu ittiin dhaadatuufis FAANDHAHII ta’eera! Kun immoo kaayyoo isaa waan ta’eef, ittiin boona!
ABOn 19973/1991s ABO ammaas kuma keenya; hunduu firii wareegamtoota keenyaa ti; hunduu kan Oromoo fi Oromiyaa ti; mara keessattuu, injifannoolee goonfanne qabna; wareegama baafne qabna; jabinoota horanne qabna; mudaalee qabaannee dabarre qabna; muuxannoolee horannee gabbifanne qabna; hunda isaaniiyyuu kan itti boonnu malee kan itti leeyyofnu miti! Waan itti yeellofnus hin qabnu! Akka ittiin boonetti, akeeka keenya guutuutti milkeessuuf amna keenya eegalle, jabaannee itti fufna!
ABOn Kaayyoo dha!